Mikrofoono lagu meeleenayo xaafadaha Stockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mikrofoonyadan ayaa la rabaa in ay duubaan rabshadaha halkaas ka dhaca. sawir: Andreas Hillergren / TT /
Mikrofoono lagu meeleenayo xaafadaha Stockholm
La daabacay torsdag 16 november 2017 kl 14.08
Boliiska magaalada Stockholm ayaa ogolaasho la siiyay in ay mikrofoono ku meeleeyaan qaar ka mid ah xaafadaha Stockholm. Kuwan ayaa ah Rinkeby, Husby iyo Tensta. Waxaa la rabaa in ay duubaan rabshadaha halkaas ka dhaca.
–Maya ma doonayo in mikrofoon lagu dhageeysto xaafada aan deganahay. Sidaas ayey sheegtay Amina oo xaafada Husby ku nool.
Mikrofoonadan ayaa marka ay tusalahaan maqlaan qeeylo, xabadeeyn amba muraayado jajabay duubaya codadkan dabeetana warbixinta si toos ah ugu diraya boliiska iyo ambalaaska si ay dhakhso ugu gaadhaan goobtaas.
Waa markii ugu horeeysay taariikhta ee la isticmaalo qalab noocan oo kale si looga hor tago dembiyada. Boliiska magaaladan ayaa sheegay in mikrofoonadani keligood is shidayaan marka ay maqlaan xabadeeyn amba codad dhaadheer. Mikrofoonadan ayaa xidhnaanaya wakhtiyada kale islamarkaas na duubeeyn dadyowga halkaas ku nool marka ay dibada marayaan.
Sida uu go´aanka maamul goboleedka Stockholm sheegayo ayaa boliiska la siiyay ogolaasho in ay boqolaal mikrofoono ku meeleeyaan xaafadahan. Qalabkan ayaa si toos ah ula xidhiidhaya xaruunta boliiska magaaladan islamarkaas na farriin u diraya teleefanada boliisyada markaas shaqada ku jira.
In kasta u boliisku ku ballan qaaday in aaney duubi doonin dadka xaafadahan ku nool Amina wexeey sheegtay in aaney rumeeysaneeyn taas.
– Umaleeyn maayo in ay rabshadaha keliya duubayaan, khasab anaga na mikrofoonkaas ayey naga dhageeysanayaan, ayey sheegtay Amina oo xaafada Husby ku nool.